ch2မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch2မဿဲ
2:1 ဆိုတော့, ယရှေုသညျယုဒအမျိုးသည်ဗက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည့်အခါ, ရှငျဘုရငျကိုဟေရုဒ်မင်း၏လက်ထက်ကာလ၌, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, အရှေ့မျက်နှာမှမာဂုပညာရှိယေရုရှလင်မြို့၌ရောက်ရှိ,
2:2 ဟုဆို: "ဘယ်မှာဖြစ်တော်မူသည်ယုဒရှင်ဘုရင်မွေးဖွားလာသော? အရှေ့ပြည်၌သူ၏ကြယ်မြင်ကြပြီများအတွက်, ကျနော်တို့ကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့လာကြပြီ။ "
2:3 အခုတော့မင်းကြီးသည်ဟေရုဒ်မင်း, ဒီကြားနာ, ပြီးစိတ်ပျက်ခဲ့, ကိုယျတျောနှငျ့အပေါငျးတို့ဂျေရုဆလင်.
2:4 နှင့်အတူတကွယဇ်ပုရောဟိတ်အပေါငျးတို့သခေါင်းဆောင်များစုဆောင်း, နှင့်လူမျိုး၏ကျမ်းပြုဆရာ, သူသည်ခရစ်တော်ဖွားမြင်လိမ့်မည်ဟုအဘယ်အရပ်မှအဖြစ်သူတို့နှင့်အတူတိုင်ပင်.
2:5 ထိုသူတို့သညျအထံတျောကပြောပါတယ်: "ယုဒပြည်ဗက်လင်မြို့၌. ဒါကြောင့်အဘို့ပရောဖက်ကရေးသားထားသည်:
2:6 'ပြီးတော့သင်, ဗက်လင်မြို့, ယုဒပြည်, ယုဒအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များအကြားအနည်းဆုံးအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့များမှာ. ကနေအဘို့အသငျသညျငါ၏လူစုဣသရေလအမျိုးကိုလမျးညှနျရကြလိမ့်မည်သူအုပ်စိုးသောမင်းကိုထွက်သွားကြလိမ့်မည်။ ' "
2:7 ထိုအခါဟေရုဒ်မင်းကြီး, တိတ်တဆိတ်ယင်းမာဂုပညာရှိတောင်းဆို, စေ့စေ့သူတို့ထံမှကြယ်သညျထငျရှားအချိန်သင်ယူ.
2:8 ဗက်လင်သို့သူတို့ကိုငါပေးပို့ခြင်း, ဟုသူကပြောသည်: "Go စေ့စေ့ကောင်လေးကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးဖို့. တဖန်သင်တို့သူ့ကိုတွေ့ပြီသည့်အခါ, နောက်ကျောငါ့ထံသို့အစီရင်ခံစာ, ငါဒါ, လွန်း, လာနှင့်သူ့ကိုကိုးကွယ်စေနိုင်သည်။ "
2:9 ထိုသူတို့ကရှငျဘုရငျကိုကြားလျှင်, သူတို့သှားကွ၏. ထိုအခါ, သူတို့သည်အရှေ့အတွက်မြင်ခဲ့ပြီးသောကြယ်ပွင့်သည်သူတို့ရှေ့သို့ချီသွားလေ၏, ဦးတိုင်အောင်, ရောက်ရှိလာ, ကသူငယ်တော်ရှိရာအရပ်အထက်ရပ်.
2:10 ထိုအခါ, ကြယ်ကိုမွငျလြှငျ, သူတို့တစ်တွေအလွန်ကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြ.
2:11 ထိုအခါအိမ်ကဝင်ရောက်, မယ်တော်မာရိနှင့်အတူအကောင်လေးကိုတွေ့. ဆိုတော့, ထိ မိ. လဲမှောက်ရက်, သူတို့ကသူ့ကို adored. ထိုသူတို့၏ဘဏ္ဍာကိုဖွင့်လှစ်, သူတို့ကသူ့ကိုလက်ဆောင်တွေကိုကမ်းလှမ်း: ရှေ, လောဗန်ကို, နှင့်မုရန်.
2:12 ထိုသူတို့ကနောက်မှဟေရုဒ်မင်းကြီးထံသို့မပြန်ရမည်အကြောင်းကိုအိပ်စက်ခြင်းအတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုခံပွီး, မိမိတို့ဒေသမှအခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွား.
2:13 ထိုသူတို့ကကွာသွားပြီပြီးမှ, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သခင်ဘုရား၏တစ်ခုအိန်ဂျယ်ယောသပ်အားအိပ်စက်ခြင်း၌ထငျရှား, ဟုဆို: "ထလော့, နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်သူ၏မိခင်ယူ, အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြေး. သင်တို့ကိုငါပြောပြမှီတိုင်အောင်ထိုမြို့၌ကျန်ကြွင်း. ကနောက်မှဟေရုဒ်မင်းကြီးသည်သူ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကောင်လေးကရှာကြလိမ့်မည်ကြောင်းဖြစ်ပျက်မည်။ "
2:14 ထိုအတက်လာပြီ, သူကညဉ့်အခါကောင်လေးကနှင့်သူ၏မိခင်ကိုယူ, အဲဂုတ္တုပြည်သို့နုတ်ထွက်.
2:15 ထိုအရပ်၌ကျန်ကြွင်း, ဟေရုဒ်မင်း၏အသေခံခြင်းတိုင်အောင်အ, ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူပြောပြီဘာဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်, ဟုဆို: "အဲဂုတ္တုပြည်, ငါသည်ငါ၏သားကိုခေါ်။ "
2:16 ထိုအခါဟေရုဒ်မင်းကြီး, သူသည်မာဂုပညာရှိများကအရူးလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုမြင်လျှင်, အလွန်အမျက် ထွက်.. ဒီတော့သူကဗက်လင်မြို့၌ရှိနသောသူအပေါငျးတို့သယောက်ျားလေးများကိုသတ်စေခြင်းငှါစေလွှတ်, လူအပေါင်းတို့သည်၎င်း၏နယ်စပ်များတွင်, အသက်အရွယ်နှင့်အောက်တွင်၏နှစ်နှစ်ကနေ, သူသည်မာဂုပညာရှိမေးမြန်းသဖြင့်သိရှိခဲ့သောအချိန်နှင့်အညီ.
2:17 ထိုအခါအဘယျသို့ယေရမိကိုပွညျ့စုံခဲ့ညျပရောဖကျတစျဆငျ့ပြောပြီခဲ့သည်, ဟုဆို:
2:18 "တစ်ဦးကအသံဖြင့်ရာမကြားခဲ့ရပါ, အလွန်ကြီးစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်း: ရာခေလသည်မိမိသားတို့အဘို့အငို. ထိုမိန်းမသည်နှစ်သိမ့်စေခြင်းငှါဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့, သူတို့သည်နောက်တဖန်သောကြောင့်။ "
2:19 ထိုအခါ, when Herod had passed away, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt,
2:20 ဟုဆို: "ထလော့, နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်သူ၏မိခင်ယူ, and go into the land of Israel. For those who were seeking the life of the boy have passed away.”
2:21 ထ, he took the boy and his mother, and he went into the land of Israel.
2:22 ထိုအခါ, hearing that Archelaus reigned in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in sleep, he withdrew into parts of Galilee.